Nkọwapụta nke tii-ngwakọ rose Blue Nile: ụdị dị iche iche bụ ụdị ụcha nke mbụ - Osisi - 2020
Rose Blue Nile - njirimara nke ifuru osisi
Rosa Blue Nile mepụtara Rosa Blue Nile na France na 1981 site na Delbar. Na obere akụkọ ya, e nyela onyinye dị iche iche ugboro ugboro.
N'agbanyeghị aha ahụ, rose nwere ụcha lilac-acha anụnụ anụnụ. Nwa osisi nke osisi ahụ buru ibu nke ukwuu, na steeti mepere emepe ọ nwere ike iru 12 cm na dayameta na n'ihi nke a, ọ dị oke mma na ogologo gị. Dịka iwu, otu ifuru na-eto n’elu pensụl, na-esiri ike ọnụọgụ ahụ rute ụzọ anọ. Oke ohia tozuru oke nwere ike itolita n’ogologo kariri 1.5 n’ogologo na obere ihe kariri 1 n’obosara. Ma ogo ikpeazu nke osisi ahụ dabere na ihu igwe nke mpaghara ebe a kụrụ ya. Ọ bụrụ na ihu igwe na-ekpo ọkụ ị nwere ike ime kwachaa, mgbe ahụ na mpaghara oyi na-atụ aro ka ibelata ị ga na elu 75 cm.
Rose Blue Nile
Blue Nile bụ nke ezinụlọ ngwakọ tii acha ọbara ọbara. Ma ekele ya na-esi ísì ya na ndetu nke citrus na mkpụrụ osisi, yana n'ihi nsachapụ ya, ọtụtụ ndị na-elekọta ubi gbara mbọ ime ihe na-atọ ụtọ. Ifuru ahụ na-eto eto okpukpu abụọ n'etiti mmalite nke ọkọchị na ngwụsị Septemba ma nwee ike iji ya chọọ ya mma, dị ka ndozi mmaji ahịhịa na ifuru.
Tupu ị kpebie nhọpụta, ị kwesịrị ịmata onwe gị na abamuru ya na ọghọm ya tupu oge eruo. The pluses gụnyere:
ụcha ụịrị ụbara;
okpukpo di nma ma sie ike;
ntu oyi iguzogide;
ọmarịcha mma nke oke ohia, na-enye ohere iji ya mee ihe na njiri mara mma;
ike ịkpụ okooko osisi n'ime bouquets;
edoghi anya na ahapụ.
Site na cons gụnyere: ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ogwu na azuokokoosisi, nguzogide na-arịa ọrịa dị iche iche, na mpaghara nwere ụla oyi, ntụkwasị obi nke oke ohia achọrọ, enweghị ihu igwe mmiri.
Ebe ọ bụ na etolitewo ngwakọ ahụ maka ebumnuche ndị a, ọ dabara adaba na ụdị dị iche iche nke imepụta ala.
Attentionaa ntị! A ga-akụ ifuru ma n’otu n’otu na n’otu ahihia. Ọ na-adịkwa mma na ihe mejupụtara nke osisi ndị ọzọ. Rosa Blue Neal nwere nkwekọ na ya na okooko osisi odo, pink na acha anụnụ anụnụ.
Mkpa ihe na-eto eto chọrọ
O kwere omume itolite site na mkpụrụ, mana nke a bụ usoro dị ogologo ma na-agbagha. Ya mere, a ga-atụle nhọrọ nke ukwuu - germination nke seedlings.
Rosa Frederic Mistral - njirimara ifuru
Ọdịdị nke osisi toro eto ga-adabere n'ịdị mma nke ihe ọkụkụ, yabụ ekwesịrị ịhọrọ nhọrọ nke ọma. Mgbe ị na-ahọrọ mkpụrụ, ị ga-ebu ụzọ lebara ihe ndị a anya:
ọ bụrụ na ifuru dị ogologo ma dị nro, mgbe ahụ osisi ahụ nwere ike daa ọrịa;
A ga-etoliterịrị usoro mgbọrọgwụ;
azuokokoosisi kwesịrị ịdị ike ma nwee ezigbo akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ;
ekwesighi iferi emeghe;
stalks na oge ịse ga-abụrịrị abụọ.
Ka rose wee oge ntoju nke ọma, a ga-akwadebe seedlings tupu oge eruo. A na-eme nke a nke ọma n'isi mmalite oge opupu ihe ubi. Iji mee nke a, a ga-echekwa ha n'ime ụlọ dị jụụ na ala ma ọ bụ ájá. N'okpuru ọnọdụ ndị dị otú ahụ, osisi na-echere Mee ma ọ bụ June (ọ dabere n'ọnọdụ ọnọdụ ihu igwe nke mpaghara ahụ), wee mịnye ya n'ọhịa. E kwesịrị ime ka ụwa dị ọkụ ruo 12 ° С. Egbula oge site n'iwegharị ya, ebe osisi na-eto eto anaghị anabata ikpo ọkụ nke ọma.
Dị Mkpa! Tupu ịmalite, a ga-ebipụ mgbọrọgwụ nke seedling ma tinye ya na mmiri ruo awa ole na ole ka ha wee nwee mmiri mmiri jupụta.
Ka tea-ngwakọ na-acha anụnụ anụnụ bulie ka ọ dị mma na saịtị ahụ, ọ dị mkpa iji dozie ókèala maka ịkọ tupu ya. Ọ ka mma ịhọrọ ebe echebere site na ifufe, mana n’otu oge anwụ na-acha. Can nwere ike ịkọ osisi n’akụkụ ụlọ ọ bụla ma ọ bụ toro ogologo, ma e wezụga cherị, pears, raspberries na uyi nke ugwu. Ros na esoghi ha nke oma.
A ghaghi ịtọpụ ala ma kee ya tupu emee ya. Ka osisi wee gbanye mgbọrọgwụ ma ghara ịnwụ n'oge oyi, a ga-akụ ya n'oge opupu ihe ubi. Ọ dị nso na mmalite nke oge oyi, a na-atụ aro ịmịkọta ala na humus ma ọ bụ nri.
Maka ezi ịkụ mkpụrụ nke kwesịrị, ị ga - agbaso otu usoro maka ịgbanye ya na mmiri. A kwadebere olulu ahụ buru ibu nke na mgbe a mikpuru nke ahụ n'ime ya, mkpọrọgwụ na-adị n'efu ma ghara ịgbalata. Mgbe ahụ wụsara ngwakọta nke ájá, fatịlaịza na ala ebe ahụ. A na-awụpụ mmiri mmiri nke ọma. A na-etinye mkpụrụ ahụ n'ime oghere ma jupụta. A na-agbanye ala gburugburu ihe ọkụkụ ahụ ma jiri obere ụrọ jupụta gburugburu na mmiri ka ọ ga-aga karịa nke ọma. Iji kpuchido obere buds site na ihe ịtụnanya ndị na-adịghị mma, azuokokoosisi na-agbakwunye ọzọ.
Oke Osisi Bulu Uwe (Blue Ọnwa) - nkọwa nke ifuru nke agba agba mbụ
Nlekọta chọrọ ụfọdụ nuances.
Ọ dị mkpa ịnye mmiri Blue Nile Rose mmiri obere, mana jiri nlezianya. A naghị anabata nkụ nke ụwa. N'okpuru ọnọdụ ihu igwe dị mma, a na-eme mmiri ịsa ahụ na ọnụ ụlọ otu ugboro n'izu. Otu ohia na-ewe mmiri dị 5 lita. Mgbe oge oyi na-ekpo ọkụ ma kpọọ nkụ, ịgba mmiri na-abawanye. Wụsa mmiri na mmiri dị warara ka usoro mgbọrọgwụ ghara imebi ma mmiri mmiri adịghị abanye na epupụta na buds, ma ọ bụghị ya, ero nwere ike ịpụta na ya.
Maka ozi! Atọ na-akwụsị na ngwụsị mgbe ngwụsị nke okooko wee malite ọzọ naanị oge opupu ihe ubi.
N'afọ mbụ mgbe ịghasịrị n'ọhịa, a na-akụ fatịlaịza ihe ọkụkụ. N'afọ sochirinụ, mgbe ịghachara ifuru, a na-awụpụ ala ahụ nke ọma. Ọ dị mkpa itinye fatịlaịza na-akụ ala mmiri, nke a na-agwakọta ya na ala. Mgbe agbakwunyechara akwa akwa na ala, a na-agba ya mmiri ọzọ, wee tinye nri ma ọ bụ humus. Ọzọkwa, ị nwere ike ịkọ ifuru n'oge mkpụrụ nke akụrụ. Ọ baghị uru ifatilaiza ala n’oge okooko. Enwere ike ime nke a daa ma kwadebe maka oge oyi.
Iji mee ka rose ahụ gbasie ike ma puo nke ọma, ọ chọrọ aka ya n'oge. Thedị ndị a dị:
mmiri. Tupu usoro a, a na-enyocha ohia ahụ nke ọma, na-ajụ oyi mgbe oge oyi gachara ma wepụ alaka ya. Na ihu igwe oyi, a na-eme ka mkpịsị osisi ahụ ghee 70 cm, na ihu igwe na - ekpo ọkụ - ruo 150 cm;
oge ọkọchị. Iji kwado uto nke Roses, a na-ewepụ ifuru wilted;
mgbụsị akwụkwọ. Emebiri emebi, mebiri emebi na oke toro mkpirisi, a na-akwadebe osisi ahụ maka oge oyi.
Ka ohia wee tojupụta nke ọma, a na-atụ aro ịgbanwe ya ọzọ kwa afọ. A na-eme usoro a nke ọma na Eprel ma ọ bụ Septemba. N'oge ọkọchị, ịnwere ike ịmegharị osisi ahụ ma ọ bụrụ na ihe mberede:
ọ bụrụ na etolitewo ifuru ahụ n'ala na-adịghị emebi emebi, mgbe ahụ, mgbọrọgwụ ga-eto n'elu, na ohia nwere ike ịnwụ;
ma ọ bụrụ na ala emebisịala nke ọma, n'ihe metụtara osisi nke ifuru anaghị acha;
mgbe ohia toro oke. N'okwu a, o zuru ezu iji bepụ ma gbanye akụkụ nke ihe ọkụkụ.
Dị Mkpa! O kwere omume iweghachite okooko osisi nke ifuru naanị mgbe ewepụchara okooko osisi niile, ebe ọ bụ na ebe ọhụrụ agha niile nke osisi ahụ kwesịrị ịga na-ewusi ike.
Ọ bụ ezie na ụdị mkpụrụ osisi a nwere ezigbo mmiri na-eguzogide mmiri, a ga-ekpuchi ifuru ya na oke ntu oyi. A ga-eji mkpịsị ahịhịa na ahịhịa kpuchie ị ga-eme ka ịfụchaa ya, jirikwa alaka fọdụkwara ya. Ọ bụrụ na oge oyi dị ezigbo oyi, mgbe ahụ ị ga - agafe n’ọhịa ịkwesiri ịme etiti ma kpuchie ya na plastik.
Rosa Limbo (Limbo) - njirimara nke osisi ahịhịa
Nnukwu ifuru nke Blue Nile na-ada na oge site na June rue November. N'ime ọnwa ndị a, mkpụrụ osisi na-acha ifuru na-eto eto n'enweghị nsogbu ọ bụla. Mgbe nke a gasị, izu ike dị. Ka osisi wee too nke ọma, ọ chọrọ nlekọta kwesịrị ekwesị.
Tupu ọdịdị nke buds, a na-emepụta fatịlaịza na mgbakwunye potassium-phosphorus. N'oge etolite nke ifuru, a ghaghi inye ahihia nkpuru nri. A na-eji fatịlaịza nwere potassium, sọlfọ na mmiri site n’oge udu mmiri, nakwa site na phosphorus na nitrogen ugboro ọdịda. Iji meziwanye mmepe nke usoro mgbọrọgwụ, a na-ebipụ ndị mbụ buds na-egosi. N’oge okooko, a na-agbazi rose ma na-agba mmiri nke ukwuu.
Ọ na-eme nke ahụ, na-agbanyeghị usoro nlekọta ihe niile, osisi ahụ anaghị agba oge ntoju. Ọ bara uru ịtụle isi ihe kpatara nke na-emeghe buds:
nitrogen ókè na ala;
ị wateringụ mmiri na-ekwesịghị ekwesị;
ụmụ ahụhụ na ọrịa.
Blue Nile Rose Propagation
Mgbasa nke a dịgasị iche iche na-rụrụ site cuttings. Ọ ka mma iwere ihe ubi ozugbo amachara nke mbụ. A na-ebipụ alaka asatọ dị sentimita asatọ na mkpịsị akwụkwọ na etiti akụkụ nke azuokokoosisi. A na-eme obere mbepụ ya na mpaghara, na elu kwụ ọtọ. Ka mgbọrọgwụ usoro toro ifịk ifịk, tupu kere cuttings na-mikpuru ruo awa 20 ke akpanam nke sodium humate ma ọ bụ mgbọrọgwụ. Mgbe oge a gasị, were mmiri offyị wụchaa ma wụchie ya.
Maka mkpụrụ, a na-eji ájá osimiri ma ọ bụ ngwakọta ájá na peat eme ihe. A na-akụ mkpụrụ ahụ n'otu akụkụ ruo omimi nke ihe dịka 2 cm ma jirizie ihe nkiri kpuchie ya. A na-agbanye mkpụrụ osisi ahụ mkpụrụ osisi Seedlings ọtụtụ oge n'ụbọchị. Ọ bụrụ na emechara ihe niile n'ụzọ ziri ezi, mgbe ahụ n'ọnwa kwesịrị mgbọrọgwụ. Mgbe nke a gasịrị, ewepụrụ ihe nkiri ahụ, ma na-enye mkpụrụ osisi ahụ nri maka izu abụọ site na iji otu urea.
Iji gbochie ekpughere Blue Nile site na mildew powdery na agba ntụ, ọ zuru ezu iji mepụta mgbochi: na oge opupu ihe ubi, mgbe akwụkwọ mbụ pụtara, a na-efesa igbo ahụ na ngwọta soda. Ọgwụgwọ ugboro abụọ n'izu ruo mbido July.
Megide aphids akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, tincture nke ncha ngwọta na wormwood ga-enyere nke ọma. Ihe mejupụtara ngwakọta a bụ sie ma sie ya, emesia nke ahịhịa ahụ na-edozi ihe ọ na-akpata ga-eme ya otu ugboro n'izu rue mgbe nje ndị ọzọ na-apụ n'anya kpamkpam.
Ngwurugwu Blue Nile maka onye na-amu amu. Agba pụrụ iche nke buds, n'ezie, mara mma, mana enwerekwa ihe isi ike na nlekọta. Ka ịhọrọ ya maka ọdịda ma ọ bụ na ọ bụghị, onye ọ bụla na-ekpebiri onwe ya. N'ọnọdụ ọ bụla, tupu ịkụ, ịkwesịrị ịkọwa onwe gị na nkọwa nke iche iche ma soro ihe niile chọrọ ịkụ.